Yeed - Wikipedia
Degmada Rabdhuure waa degmo ku taalo Gobolka Bakool. Degmada waxaabees beeraha Raxaweyn waxay kamid aheyd degmooyinkii dalka Soomaaliya waxay degmonimada qaadatay Juun 1971 dii, Waxay ka mid tahay degmooyinkii burburay kadib dagaaladii dhaxmaray Soomaaliya iyo Itoobiya 1977 -dii ilaa 1982 -dii. Yeed waxaa loo raray degmonimada Rabdhuure oo u dhaxeysa Burdhuhunle yeed gaar ah waxaana DIB loogu celiyey rabdhuur, guddoomiyihii degmada rabdhuure ee ugu dambeeyey 1987-1990 wuxuu ahaa shekh cumaryusuf. . Rabdhuur Waxay xuduud la leedahay tuuladayed baarey ee gobalka afdheer somali State of ethiopia (Ogaden)
Rabdhuure Waxay caan ku tahay Xabagta fooxa (beeyada), Xoolaha nool, waa dhul caro san ah oo ay xoolahu si fiican ugu dhaqmaan. Degamada rabdhuure Waxaa -, laga billaabo 2016 waxaa xildhibaan loo doortay .
Degm,rabdhuure Gobolka Bakool, dalka Soomaaliya:
Masuulkan waxaan ka qoray warbixin dheer oo ku saabsan taariikhda gobolka Bakool gaar ahaan taariikhda degmooyinka rabdhuure Ceelbarde iyo tiyeeglow. 1960-kii xorriyadda dalka Soomaaliya kadib.
Gobolka Jubbada sare (alt Juba) ayaa la isku dhihi jirey Bay, Bakool iyo Gedo gobollada hadda loo yaqaanno waxaa laga xukumi jirey Baardhere
Markaas jubbada sare waxay aheyd degmooyinka Baydhabo, Xuddur, Baardheere, Luuq iyo Buurhakabo.
1971-dii ayaa la magacaabay degmoiyin waxaa degmooyin qaatay bishii 6. 1971: 1. Rabdhuure 2. Waajid 3. Tiyeegloow Xuddur oo ah xarunta gobolka Bakool ee cusub sidaas Gobolku wuxuu ku noqday 4 degmo.
1972-dii waxaa la kala qeybiyey gobolkii Bay mar kale waxaana laga dhigay Bay iyo Gedo, isla sannadkaas waxaa degmonimo qaatay 8. 1972: 1. Rabdhuure 2. Saakoow 3. Diinsoor 4. Beledxaawo 5.Ceelwaaq 6. Garbahaareey Degmada Garhaareey oo markaas qaadatay degmonimo ayaa magaalo madax looga dhigay gobolka Gedo.
1960-kii xorriyadda Soomaaliya waxaa laga soo doortay Sh. Maxamed Aden Coomeey, Sh. Mukhtar iyo nin kale oo aanan xasuusan magaciisa ( 1 MPcJilible-Raxaweyn iyo 2 MP Hadame D/Mirifle).
1964-tii doorashadii Bakool waxaa kasoo galay
.. Mukhtaar-jiroon (1MP ilible-Raxaweyn
iyo 2 MP Raxaweyn).
1968-dii waxaa Bakool kasoo galay Diiriye, sh. Mukhtaar, Mad Guudoow ( 2 MP ).
Rabdhuure: --— Rabdhuure waxay degmonimo qaadatay Juun, 1971-dii waxay xuduud la leedahay:
Koonfur- Waajid Galbeed- Luuq Waqooyi- Baareey Itoobiya Bari - Xuddur Waqooyi Bari - Ceelbarde.
Tuulooyinka: Ceelgaras, diidocanaani, qooneey, shimbiro, dhuureey, gorayaale, xabow, washaaqo, Allamo, darmaajiid, qorofdhurwaa, dhamaajaaleey, dhax-xirleey, ceel-la-Helay, qoracleweyne, yeed, boodaan, wardhutileey, lagalaay, gubato, ceel ka-riigga, iwm. Guddoomiyaha degmada rabdhuure ee maanta waa Cabdulaahi iidow.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Yeed&oldid=198916"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 7 Febraayo 2020, marka ee eheed 17:58.